Inhloko-dolobha ye-Qatar - Doha noma njengoba ibizwa nge bendawo, i-Al-Doura, esisogwini enamadwala ogwini olusempumalanga enhlonhlweni ye-Qatar. Inkulumo Echaza Isimo Qatar - izwe Arab nge umlando onothileko nangokuthuthumela ukugcina amasiko Islamic.
Esimweni sezulu efudumele lapho izinga lokushisa lifinyelela + 50 degrees Celsius, inhlokodolobha Qatar - Doha - elise ingxenye enhle ka ePersian Gulf. It yasungulwa hhayi kudala - ngo-1897. I amakota ubudala e evamile isitayela Arabhu namanje edonsela umlando buffs. Bona umkhawulo izakhiwo ezintsha sesimanje ezikhanga ngobuhle bazo, play walingisa amafasitela, ovuthayo ebusuku nge izibani ezinemibala.
Nokho izinto "emzini omdala" uthwebule imfihlakalo yayo futhi elikhangayo. inhlokodolobha Qatar sika yasungulwa emir lokuqala Al - Thani, owakhetha indawo yakhe impela eduze lolwandle kanye esingamakhilomitha ayisishiyagalombili ngasolwandle esplanade ezizungezile enhlokodolobha.
Doha - Qatar Business Centre
Doha - inhloko-dolobha Qatar, izwe elincane elisempumalanga ngempela ibhizinisi isikhungo ngobukhulu kuleli zwe. Iziphathimandla baqonde ukuthi ukusungula ezingumphumela womkhiqizo akunakwenzeka ngenxa ngaphansi kwezimo ezinzima sezulu, ukuze wonke amabutho iziphathimandla okuhloswe ngaso kabusha ibhizinisi wezwe omkhulu.
Doha kufana enkulu lapha kwakhiwa khona ngamabhlogo, enikezwe esakhiwe yezitolo nokuzijabulisa izikhungo, amahhovisi kanye amahle villa, isiqhingi emangalisayo yokufakelwa. Njalo is iparele siqhingi. Lapha lihamba emahhovisi abo ukusebenza osomabhizinisi, izinkampani, abayiziqumama nabezombusazwe. Inhloko-dolobha ye-Qatar, ngomusa isingathwe nabalingisi ethandwa, abasubathi kanye nezivakashi.
Izivakashi ibhizinisi kuleli zwe okhula ngokushesha, okuyinto kunciphisa ingozi ucabanga isimo uma kwenzeka ekunqanyulweni kwe ukukhiqizwa uwoyela nangamaparele. Izwe ayisekho kwenza Bangababambi pearl kanye nemithombo yemvelo kungaholela. Ngakho-ke, Qatar, I-Doha inhlokodolobha kuhlanganise zonke isukela uwoyela ukutshala imali ngokwakho, ekuthuthukiseni nokwakhiwa amahhotela, Villas ukunethezeka, ekwakhiweni zamasiko kanye ibhizinisi. Doha namuhla - ingenye yamadolobha ekhula ngokushesha emhlabeni.
Amaholide e Qatar
esidumile yenhloko-dolobha obonwa Qatar National Museum, esemgwaqweni esigodlweni yangaphambili Abdullah bin Mohammed. Kukhona ifakwe ithangi ezimbili-level, okuyizinto abakhileyo esishintshashintshayo ugu. Enye ingxenye Museum unikezwa phezu iqoqo yangasese Sheikh lapho ungabona ziphephile ezithakazelisayo ezihlobene umlando ethnography yezwe.
Doha idume amathempeli yayo. Omunye wabo Al Ahmed - isakhiwo enhle lathumela, libhekene nempahla okunethezeka.
Abantu abavakashela kuleli dolobha ukujabulela ngokuvakashela inqaba ubudala, owawungumnyaka yokuhlala eyinhloko abantu lokuqala isimo.
I-Ethnography Museum itholakala ku-indlu abavamile Qatari, futhi Museum of Islamic Art kuyoba sithakazelise kuzo zonke izivakashi abanesifiso umlando isimo.
Amaholide e Qatar kuyinto ekahle labo bayathanda eshisayo. Inhloko-dolobha ye-Qatar ingenye yezindawo friendliest emhlabeni, abantu bendawo ukwamukela ku cafe, yokudlela, futhi lapho sihamba emigwaqweni nalapho emakethe. Doha ithole endaweni yalo efanele phakathi zokungcebeleka zonke emhlabeni.
Zelenograd - eMoscow: isitimela. Kanjani ukuze uthole Zelenograd